Archive du 20200523
Mampihoro-koditra ny Covid-19 Tafiakatra 448 ireo voa, 2 marary mafy
Tranga 43 vaovao no notaterina omaly izay ny 38 tany Toamasina ary 5 teto Antananarivo, ka nampiakatra ny isan’ny voa rehetra ho 448. Tao anatin’ny fitiliana 147 nataon’ny IPM izay avy any Toamasina fa notiliana teto Antananarivo dia nahitana tranga 20.
Atao haingam-pandeha daholo !
Tsy vao sambany amin’izay heverina ho vakoka nokitihan’izao fitondrana izao akory ny lapan’i Manjakamiadana, raha ho an’ny teto Antananarivo sy ny manodidina fotsiny no akana ohatra.
Ramatoa nitondra volabe Ny mpanampiny no niantso mpanendaka handroba azy
Ramatoa iray handeha hamonjy fodiana no nanaovan'ireto mpanendaka roa ny asa ratsiny ny 14 mey lasa teo tany Antsirabe.
Mahitsy Voaendaka ry Zoto 5 mianaka
Nisy nanendaka ry Zoto sy ny fianakaviany raha niala teny Andranomena ny alakamisy teo, hiazo an’i Mahajanga ary hamonjy ny trano fonenany any Antsiranana.
Fanapoizinana niaro halatra Olona 5 nosamborina
Nitrangana toe-javatra mampalahelo tao Ambohimanarivo distrikan’i Manjakandriana faritra Analamanga ny 18 mey lasa teo.
Toamasina Taolam-paty 134 isa hita tao anaty fako
Taolan-dava miisa 134 no hita tamina toeram-panariam-pako iray tao Marovato fokontany Antanandava distrakan’i Toamasina II faritra Atsinanana, 20 may lasa teo.
Moramanga Ireo antony mahamaro ny voan'ny covid-19
Antony 3 mazava no azo lazaina fa nampiakatra ny isan'ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina covid-19 aty amin'ny distrikan'i Moramanga, hoy ny tompon'andraikitry ny tanàna iray tafaresaka an-telefaonina tamin'ny Tia Tanindrazana.